China Iphone Rafitra Fiarovana An Trano China Manufacturers & Suppliers & Factory
Bateran'ny telefaona finday
Fitaovana finday finday
Iphone Rafitra Fiarovana An Trano - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Iphone Rafitra Fiarovana An Trano)
Ahoana ny fanoloana ny bateria iPhone mora foana
Fahafahana ny Super fanamboarana paoma iPhone 6 bateria dia nivory avy amin'ny avo lenta IC Chip, izay manome ny finday faran'izay fiarovana sy ny fanaraha-maso ny finday mandeha ho azy bateria nihazakazaka status.UL voamarina finday bateria vaovao fototra amin'ny faritra Fiarovana System iPohne miantoka...
Saika amidy amin'ny bateria iPhone 7% vaovao
Ity bateria 2200 mAh ity dia ilaina amin'ny fanoloana bateria iphone 7 . Mampiasa A kilasy marika bateria sela mba hahazoana antoka ny iPhone bateria dia mateza sy ny tranon'omby. Izy dia maivana maivana, avo lenta sy ambany impedance, kalitao mitovy amin'ny tany am-boalohany. Manodidina ny 500 ~ 800 eo ho...
Ny batterie Super Extension Li-ion polymer iPhone 6s
Modely dia nanazava araka ny fahaiza-manao avy amin'ny fitsipika ambony iPhone Battery, manerana izao rehetra izao 2200mah ho an'ny iPhone 6 Battery, iPhone 6S Battery, iPhone 7 Battery sy 3300mah ho an'ny iPhone 6 Plus Battery, iPhone 6S Plus Battery, ary iPhone 7 Plus Battery. Amin'ny alàlan'ny...
Programam-bateria fanamoriana finday avo lenta
I bateria Iphone 6 Plus dia manana fahaiza-manao lehibe kokoa amin'ny 3300mAh ho lasa maharitra mandritra ny fotoana avy amin'ny bateria Apple iPhone 1515mAh tany am-boalohany, ho finaritra ianao ary miala sasatra amin'ny alàlan'ny polymer avo lenta, tanterahana amin'ny herinaratra, mateza kokoa...
super-fanamboarana paoma iphone 6 bateria
Voalohany, ny antony ankapobeny sy ny fikarakarana ny bateria iPhone 1. Ny fahaiza-mandanjalanja amin'ny fampiasana ny fotoana finday no fomba tsara indrindra hanitarana ny fiainan'ny bateria Apple . 2. Mametraka ny rindrambaiko fitantanana herinaratra an-telefaona mba hizara fahefana amin'ny fomba mety....
vaovao iPhone 6 paoma fanoloana bateria
Ny iPhone 6 dia efa niady nandritra ny efa-taona mahery, ary ny bateria finday dia somary tsy mety hita intsony, ka nanomboka nandinika momba ny fanoloana bateria iPhone an'ny olona fahatelo aho. Afaka mahita mora foana ianao ho an'ny antoko fahatelo batterie iPhone amin'ny harena manokana. Ny sasany dia...
manaova bateria vaovao 6 bataly vaovao
Ny batterie Apple iPhone ofisialy dia lafo vidy, ny ankamaroan'ny olona dia te hampiasa ny fametahana bateria iPhone hanova izany rehefa misy olana momba ny batterie amin'ny iPhone, marobe marika eny an-tsena, azafady mba fidio ny marika HN marika amin'ny rohy alibaba: szhqqn.en.alibaba.com na...
Mividy Apple iPhone 8 Plus bateria vaovao
Ny smartphone an'ny Apple 8 dia mampiasa ny coprocessor Apple A8 + M8, noho izany dia novidian'ny olona maro io smartphone io. Hatramin'izao, mpanjifa betsaka dia mampiasa smartphone Smartphone 8. Ary fantatry ny rehetra fa ny bateria finday Apple 8 dia 1821mAh ihany, ary rehefa ela ny fampiasana azy, dia...
fanamboarana paoma fanamboarana tany am-boalohany iphone 6plus bateria
Vao haingana ny Apple dia namoaka "hetsika lehibe". Raha mividy ianao ary manolo ny bateria Apple fahatelo fa tsy bateria iPhone ofisialy, dia hampisongadina ny "fanidiana batterie" amin'ny telefaona Apple, izay hanakana ny fahasalaman'ny finday finday sy ny fiasa hafa. Lasa nividy finday...
marika vaovao vaovao amboarina iphone 6 bateria
Tsy voalaza ny hanolo ny bateria finday an'ny Apple amin'ny alalanao. Azafady alefaso any amin'ny Apple ny serivisy finday na ny fivarotana finday matihanina ho an'ny fanoloana iPhone bateria . Raha voarakitra ao ambanin'ny warranty ny iPhone-nao, ny serivisy serivisy AppleCare +, na ny lalàna...
manova solo apple apple 6 bateria
Maharitra rehefa avy nanova ny iPhone 6 bateria ? 1. Amin'ny ankapobeny, aorian'ny fanoloana ny bateria Apple 6 dia hihatsara ny fiainana ny Batterie Polymer Phone amin'ny finday. Ny batteran'ny telefaona telefaona dia tsy aharitra satria mihena ny fahafahan'ny Iphone 6 Batteran'ny ivelany...
ela velona tany am-boalohany iphone 6 bateria
iPhone 6 anjara asan'ny fanovana bateria : Ho an'ireo fitaovana iOS taloha efa nampiasaina nandritra ny taona maro dia ny ampahany lehibe indrindra dia ny fiainana iPhone batterie lasa fohy kokoa ary fohy kokoa. Taloha, fiampangana iray no nampiasaina isan'andro. Ankehitriny, fiampangana roa izany...
lihium replacement cell phone iphone 6s plus bateria
"Apple Iphone 6s Battery dia 1715mAh. IPhone 6s Plus dia fofona bateria 2750mAh. Fampahalalana fanampiny: Fikojakan'ny bateria finday Apple : 1. iPhone dia mampiasa batterie polymer finday , tsy misy fahatsiarovana fahatsiarovana, noho izany dia tsy mila manefa tanteraka. ary mamoaka isaky ny mandeha (izany...
1715mah fametahana paoma iphone 6s bateria
Raha mikasika ny telefaona Apple dia ny tiako indrindra dia ny rafitra azy ary ny tiako indrindra dia ny batteran'ny finday . Ny fiainana batterie Apple dia tsy tena tsara amin'ny herintaona. Ireo Apple 6s ampiasainy irery dia efa niasa nandritra ny 3 taona. Zahao ny 6s Apple Nahatratra 76% ny fiainana bateria...
ela velona ivelan'ny bateria iphone 6plus finday
Amin'izao vanim-potoana iarahan'ny telefaona finday tafahoatra izao, ny bateria finday no mahatonga ny fahatongavan'ireo telefaona matetika antsika. Fantatsika rehetra fa lany ny bateria finday . Rehefa mitombo ny fotoana ampiasaina, dia mihena koa ny fiainana bateria Smartphone . Ny vetivety kokoa ny...
vaovao fanoloana exrernal iphone 6 miampy bateria
Fanitarana: [Fanamarihana ho an'ny iPhone6 ​​/ 6 Plus fiampangana] Tsy mila andoavanao mandritra ny 12 ora mandritra ny adidy voalohany ianao, satria ny batterie iPhone ankehitriny dia bateria Polimera an-tariby .Io tsara dia manana fiasa feno sy manakarama feno. herinandro.iPhone6 ​​/ 6 Plus dia manana fiasa...
fifanakalozana fitaovana amin'ny finday fanoloana iphone 6
Ny iPhone 6 dia navotsotra nandritra ny 5 taona. Ankehitriny ny olana lehibe indrindra dia ny bateria finday . Ny bateria Polymer an-tariby dia lavo tsy azo ovana. Taorian'ny fampiasana an-taonany maro dia mety mbola afaka mihodina ara-dalàna na mampiasa azy io mandritra ny ora maromaro. Manana bateria iPhone 6...
Miova fanoloana bateria iPhone vaovao
Betsaka ny namana no nanavao ny rafitra IOS farany ary nahita fa tamin'ny safidy nomen'ny bateria iPhone tamin'ny fikandrana an-telefaona, ny menu [Battery Health] dia mampiseho ny [Maintenance], inona ny toe-javatra? Jereo aloha ny antony ofisialy Apple amin'ity fanamboarana bateria Apple ]...
iPhone 6 bateria fanoloana finday
Rehefa tafarina amin'ny iOS 12 ny telefaona Apple, dia an-tserasera ny fananganana rafitra finday amin'ny finday avo lenta . Ao amin'ny iOS 12, ny telefaona manokana dia afaka mamantatra ny bateria iPhone fahatelo- an'ny . Mety hiseho izany fampisehoana izany raha nosoloinao ny batteran'ny...
bateria fanamaintisana boribory 6
Ahoana no hahitana raha voatery soloina ny bateria iPhone ? Ny voalohany no fomba tsotra sy mora indrindra. Sokafy mivantana ny fikirana iPhone ary ampidiro ny safidy finday an'ny finday . Raha tsy mandeha ny batterie iPhone misy anao, dia haseho eo amin'ny tampony ny hafatra fampitandremana ho an'ny...
OEM apple iphone 6s miampy bateria fanoloana
Fantatry ny rehetra fa tsy dia maharitra ny bateria finday Apple, ary amin'ny ankapobeny dia hosoloina amin'ny roa taona eo. Indrindra amin'ny ririnina, ny bateria iPhone dia hitsambikina mafy. Mazava ho azy fa hisy herinaratra 30 na 40 mandritra ny fotoana kelikely. Ankehitriny, namana maro no mila misolo...
lithium ion polymer fanoloana iphone 6s batterie
Ny batterie lithium ion polymer momba ny bateria fanovozana bateria 6s amin'ny volavolan-tselatra 3.82V, ny 4.8V ny volavolan-tsofina avo indrindra dia 4.35V, mitovy amin'ny bateria iphone tany am-boalohany. Ity bateria 6s ity dia natao ho an'ny iphone 6s fotsiny, tsy mifanaraka amin'ny modely iphone...
Iphone 8 Battery Fampiasa vaovao ho an'ny bateria vaovao finday
Ny iPhone 8 dia miaraka amin'ny bateria finday 1821mAh, izay manodidina ny 100mAh mahery noho ny bateria iPhone 7 teo aloha. ny herin'ny bateria iPhone 8 Plus dia 2675mAh, izay 250mAh ambany noho ny batteran'ny iPhone 7Plus teo aloha. Tsy ny hateviny ihany no nitombo 1mm, fa ny lanjan'ny lanjan'ny...
Batterya an-tariby tsy misy finday iPhone 7 Plus Batterie
Ny batterie iPhone dia mampiasa teknolojia lithium-ion. Raha oharina amin'ireo teknolojia teo aloha momba ny teknolojia batterie, dia miakatra haingana kokoa ny halavan'ny bateria Poliminon-telefaona , maharitra ela kokoa, ary manana sakan'ny herinaratra avo kokoa, manome fiainana kokoa ny bateria noho ny...
Fitaovam-pandefasan-telefaona Iphone ho banky Wireless
100% orinasa mpamokatra batterie voalohany ho an'ny huawei P20
Iphone X Slim Power Charge
ny fahitalavitra Samsung Galaxy dia manamarika ny battery a9
Iphone Rafitra Fiarovana An Trano IPhone Rafitra fiarovana an-trano Iphone 7 harona fiarovana mafy Iphone Fiarovana ambony Iphone ny fiarovana ny batterie Iphone 7 Maharitra Famoloana Battery Iphone 8 Fandaharana Fandaharana Iphone ny fiarovana mafy indrindra 6